Rosia sy Amerika Latina: Tena lavitra nefa tena akaiky · Global Voices teny Malagasy
Rosia sy Amerika Latina: Tena lavitra nefa tena akaiky
Mikendry ny hanamafy ny toerany eto amin'izao tontolo izao i Rosia amin'ny fihaikana ny Tandrefana
Voadika ny 04 Marsa 2022 8:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, Français, Português, Nederlands, Español
Illustration by Erick Retana
Ny lahatsoratra etoana dia nivoaka voalohany tao amin'ny Connectas. Ny endrika nohafohezina sy noankotrihina (mis-à-jour) no navoakan'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
“Ny toe-javatra nampisy fiantraikany indrindra nitranga teto an-tany eo amin'ny resaka ady sy fandriampahalemana hatramin'ny ady lehibe faharoa.”
Izany no namariparitan'ny filohan'i Etazonia Joe Biden ny mety ho dikan'ny fananiham-bohitra Rosiana an'i Okraina ho an'i Etazonia. Tsy nety nanazava bebe kokoa momba ny mety ho voka-dratsin'ny toe-javatra toy izany i Biden, ary tsy ilaina izany — tsy hisy tsy hahatsapa izany. Avy eo, tamin’ny 24 Febroary, nanafika an’i Okraina i Rosia.
Saingy ahoana, ary inona no mety ho vokatry ny fifanandrinana toy izany — izay tsy mety miravona na dia eo aza ny ezaka rehetra — any Amerika Latina?
Ho fiezahana sy hanatrarana fanazavana amin'izany, tsy maintsy miezaka aloha hahatakatra ny fifankatiavana-fifankahalana lava sy sarotra misy eo amin'i Rosia sy Okraina. Ny fitantarana fa vahoaka iray ny Okrainiana sy ny Rosiana no tohan-kevitra fampiasan'i Vladimir Potinina hanamarinana izay tena afeniny: tiany ny hamerina ity mpifanila aminy ity ho karazan-janabolana aminy tahaka izay nanaovana azy nandritra ny ankamaroan'ny taonjato faha-20, nanompo an'i Moskoa.
Vladimir Rouvinsky, mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Icesi ao Cali, Kolombia, nanazava ny fomba fijeriny amin'i CONNECTAS:
Amin'ny farany, fialan-tsiny fotsiny i Okraina. Ny tena atahorana eto dia ny filaminana iraisam-pirenena izay anaovan'ireo hery vaovao misandratra fihaikana, ka amin'ity tranga ity, Rosia. Amin'ny lafiny iray, manomboka mahita ny fihetsik'i Rosia eo amin'ny sehatra manerantany amin'ny ho avy isika. Mino i Potinina fa mbola mihevitra an'i Amerika Latina ho tokotaniny i Etazonia ary mifototra amin'izany, milaza fa manana zo mitovy amin'izany i Rosia hitaona an'i Okraina, Belarosia ary firenena hafa amin'ny faritra manodidina azy.
Tsy hanaiky holazaina amin'izay tokony hatao sy ny fomba tokony hatao amin'ny ampahany amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha ny filoham-pirenena Rosiana. Araka ny filazan'i Rouvinsky, “Rehefa manomboka ho hita eto Amerika Latina ny hetsika mitsimbalivaly, te hilaza aho amin'ny endrika an'ohatra hampisehoana fa afaka mahazo fitaomana any amin'ny zaratany toa vahiny i Rosia.”
Mazava fa, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao, ny toerana tian'i Rosia dia Venezoela sy Nicaragua. Samy ahitana fitondrana jadona ny firenena roa tonta izay nanaovan'i Potinina fanohanana be indrindra manoloana ireo fanamby atrehany amin'ny resaka antoka ara-demaokratika sy ny zon'olombelona.
Tokony ho ao anatin'ity lisitra ity ihany koa i Kiobà raha topaza-maso, saingy tsy manaiky ny Profesora Rouvinsky:
Ankehitriny efa tafasaraka amin'i Rosia i Kiobà amin'ny foto-kevitra. Sosialista i Kiobà, kapitalista i Rosia. Mety hiombon-kevitra amin'ny lahateny tsy tia Etazonia tarihan'i Maduro sy Ortega i Kiobà, fa tsy ampy izany mba hahatonga azy ho mpiara-dia. Tsy misy intsony izany haavom-pitokisana avy amin’ny andron’ny Firaisana Sovietika izany.
Toa niitatra lavitra noho ny didy jadona fotsiny ny fitaomana Rosiana. Toa nampidirina tao anaty lisitra ny filoha Arzantina Alberto Fernández tato anatin'ny andro vitsivitsy, raha tany Kremlin mihitsy. Nilaza izay maharavo an'i Potinina i Fernández: ” Tapa-kevitra aho fa hitsahatra amin'ny fiankinan-doha amin'ny FMI sy Etazonia i Arzantina ka hisokatra amin'ny hirika hafa, ary mino aho fa manana toerana lehibe amin'izany i Rosia.”
Nanohy i Fernández, nandeha lavitra noho izay nantenain'ny olona rehetra:
Tsy maintsy jerena ny fomba ahafahan'i Arzantina ho lasa vavahadin'i Rosia any Amerika Latina, mba hidiran'i Rosia amin'ny fomba hentitra kokoa.
Firenena resahan'ny rehetra ao Kolombia ihany koa i Rosia. Nisy fiantraikany teo amin’ny fifandraisan’ny roa tonta ny fanambaran’ny tompon’andraikitra avy amin’ny andaniny sy ny ankilany farany teo. Araka ny filazan'ny minisitry ny Fiarovana Diego Molano, ny fepetra fiarovana sarotra amin'ny sisintany ifanolorana amin'i Venezoelà dia noho ny fisian'ny miaramila avy amin'ny Repoblika Bolivariana eo akaiky eo izay “mahazo fanohanana avy amin'Iran sy Rosia”.
Namaly avy hatrany ny masoivoho Rosiana hoe: “Sahiran-kevitra izahay amin'ny fiezahana mitohy hiampanga ny Federasiona Rosiana amin'ny lazaina ho ‘fitsabahana amin'ny raharaha anatiny ao Kolombia, tsy misy fototra.” Araka ny filazan'ny solontenan'ny diplaomatika, i Molano dia mametraka ny fiampangany amin'ny “angona ara-pitsikilovana” tsy mitombina.
Mazava noho izany fa mampijoro ny fisiany any Amerika Latina i Rosia, amin'ny fanoherana ny Tandrefana. Nilaza tamin'ny CONNECTAS ny Profesora Michael Shifter ao amin'ny Dinika Inter-Amerikana fa “mampiseho ny heriny amin'ny fanehoana ny tenany ao amin'ny faritra (i Rosia). Liana amin'ny fampiroboroboana ny demaokrasia araka izay fijeriny azy i Potinina.” Ankoatra izay, tsy manao izany amin'ny fotoana rehetra izy, hoy i Shifter, fa “manararaotra ny zava-misy hoe manana olana lehibe anatiny i Etazonia, noho ny toe-draharaha politika anjakan'ny fisaraham-bazana sy tena manapoizina.”
Miaraka amin'i Rosia koa ny mpiara-dia efa tsy zoviana intsony — ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina. Araka ny voalazan'i Shifter, “Ny fifanaraham-piraisankina eo amin'ny firenena roa tonta no ahafahan'izy ireo mihetsika ao Venezoela, izay andraisan-dry zareo anjara betsaka amin'ny tetikasa ara-teknolojia sy fotodrafitrasa.” Nanampy ny Profesora Shifter fa teo aloha ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina liana kokoa tamin'ny hirika ara-barotra fotsiny, saingy mihasahy manao zavatra bebe kokoa,”noho ny fahaverezan'ny fitaoman'i Etazonia ao amin'ny faritra, ary tsy azo lavina izany.”
Niharihary izany rehefa nampidirin'ny Filoha Fernández tamin'ny fitsidihany i Beijing, ary taorian'izay dia nisioka hoe: “Nanana fihaonana tamim-pirahalahiana sy tamim-pinamanana nahavokatra niaraka tamin'i Xi Jinping, Filohan'i Shina, aho. Nanaiky ny hampiditra an'i Arzantina ho ao anatin'ny hetsika Belt and Road Initiative izahay.” Nolazainy ihany koa fa “tsara ny vokatry ny fihaonana (satria) hahazo 23 miliara dolara mahery amin'ny fampiasam-bola shinoa ho an'ny asa sy ny tetikasa” ny firenentsika.
Na izany aza, na misy an'i Shina na tsia, voaporofo fa mpilalao échec mahery vaika izay tsy misalasala mamindra ny vatofanorony amin'izay tiany i Potinina. Araka ny fanamarihan'i Shifter, singa iray manan-danja tokony hodinihina ny hoe tsy misy afaka maminavina hoe hafiriana no hijanonan'ity lehilahy ity — izay mihantsy sy manjakazaka ary toa tompon'ny hafetsena — eo an-tampon'ny fitondrana ilay sambo Rosiana tsy voatoha.